KACDOONKA BARBAARTA SITTI UULAHA LA GAADHAY – Xeernews24
KACDOONKA BARBAARTA SITTI UULAHA LA GAADHAY
4. Juli 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
KACDONKA BARBAARTA SITTI UULAHA LA GAADHAY!
Kacdoonka ay wadaan Barbaarta gobolka Sitti ee ka dhanka ah taliska Jigjiga rugtiisu tahay ee loo yaqaano in iiley wuxu soo maray marxalado kala duwan waxana uu maraya hadda marxalad aan odhan karo inay lamid tahay marxalada „dhalinta goal ka “ .
Barbaarta Sitti oo ka kooban dhalin da‘ yar ah oo madaxoogu jaamacadaha ka qaln jabiyay intooda kalana arday dugsiyeed ah waxay soo wadeen kacdoon aad u qurux badan oo firfircoon waxayna gaadheen guulo hor dhac ah oo ay kamid yihiin :
1 – Xil ka qaadistii ku xigihii taliska jigjiga “ cabdixakiin “ oo hormood u ahaa ragii ragaadiyay gobolka waligiina ka shaqaynayay siduu u hoojin lahaa u wiiqi lahaa u curyaamin lahaaa horawmar kastoo ku wajahan gobolka uu ka soo jeedo .
2- Kacdoonka barbaarta sitti wuxuu ku iftiimiyay taliska jigjiga toosh muujiyay wax qabad la’aantiisa iyo dulmiga uu ku hayo shacabka dawlad degaanka guud ahaan.
3- Kacdoonku Wuxuu ku soo jeediyay taliska dhaayaha dawlada federaalka ( oo ah mid cusub) iyo kuwa caalamka labadaba .
4- Barbaarta Sitti ayaa noqotay cidii u horaysay ee ku dhiirata inay si cad uga tidhaaho taliska jigjiga „Down “ “ Ka dag xilka “
5- Barbaarta Sitti waxay dumiyeen gidaarkii cabsida ee uu muda badan dhisayay taliska jigjiga .
6 – Barbaarta Sitti waxay noqdeen gurmad uu alle u soo diray shacabka gobolada kale ee dawlad degaanka uu talisku ka falayay wax kastuu doono ( Dil , Jidh dil , Dhac , Kufsi , Xadhig ) shacabkaa oo xasuuqa loo gaystay uuna ahayn mid ayba yartahay inuu ka jiro caalamka sadexaad .
ilaaa haadan la joogo ee barbaarta sitti ay gabagabaynayaan cimriga taliska bulshada gobolada kale ay dhibta u badan soo gaadhay ma leh hadal iyo hugun mana awoodaan naf aawadeed inay taliska hadal lid ku ah ku dhahaan .
7 – Barbaarta Sitti waxay muujiyeen gobnimo iyo hanwayni la yaableh kadib markay waxba qaban wayday lacagihii badnaa ee uu rabay taliska jigjiga inuu ku damiyo kacdoonkooga taasoo ku ridday taliska fajac iyo amakaag ilaaa uu yidhaahoo waar lacagihii miyaanad u gayn waa sideee .
8 – Barbaarta Sitti waxay waxba kama jiraan ka dhigeen awoodii qolfoofka ahayd ee lagau xeeray maleeshiyada qabyaalada ku salaysan ee loo yaqaano “ Liyuu Police “ oo loo haystay koox aan lala dheeli karin .
9 – Taliska jigjiga oo isku haystay inuu yahay boqor kuna raxaysan jiray inaa loogu yeedho “ aabo “ Barbaarta sitti way ka tuurtay taajkii beenta ahaaa oo waxay ku qasabtay inuu fadhiisto meel barax ah isagoo si qaab daran u xidhan qamiis oo wuxuu soo galay facebook ga video live ah isagoo ay ka muuqato warwar badan iyo khalkhal .
10 – Waxay fashiliyeen Barbaartu rabitaankii taliska ee ku wajhanaa inuu kala sooc sooco uu kala jajabiyo midnimada
barbaarta si cad buuna ugu guul darraystay arintaa .
11 – Kacdoonka Barbaartu bilowgiisii ilaaa maantadan aan qormadan xardhayo lama soo sheegin hal dhacdo oo ah xadgudub ay barbaartu gaysteen ama ay waxyeeleeyeen dana guud iyo mid gaarka ah toona waxay muujiyeen xilkasnimo inkastoo marar badan la doonay in laga leexiyo wadadaaa.
12 – Talisku wuxuu si dhab ah u ogaaday Beelwaynta Ciise inay dhuuni qaatayaal iyo labadublayaal ka tirsan oo loo adeegsado ayna waxba ka tarayn oo ragii uu arimahaa u adeegsaday waxay noqdeen kuwa ka takooran bulshada oo dullaysan waxayna halis u yihiin in lagu fuliyo Xeerka Ciise “ Dhagalayda laba dublaha “ oo ciqaabtiisu tahay : in la xidh xidho kadibna dhagax lagu dilo sida loogu wadana xabaashooda laga dhigo waxa loo yaqaano „xabaal ma guur“ .
Sidoo kale waxaa lagu fulin karaa ragan dhagalayda “ Xeer ka boodka“ oo ciqaabteedu tahay inaa guddi loo saaro kadibna gudidaayi soo goyso wixii ku haboon .
Ragaa ciise ee talisk jigjiga u adeegaya ee ciisaha ka dhex baxay dhagalaydaa hore ee “ laba duble “ way ku cadahay .
Dhagalayda labaad ee „Xeer ka bood “ kuna way ku cadahay oo ragan waxay si cad uga hor yimaadeen Boqorkii Beelwaynta Ciise Ogaaskii guud ee aabaha u ahaaa Beelwaynta oo dhan “ Arintaana waa arrin halis ah iyadna Dil in lagu xakumo kama fursanayso Beelwaynta Ciisayna u taalaa waxay ka yeelayaan.
Gunaanadkii : guulahaaaa aan soo sheegay waxay gogol dhig u yihiin guushii waynayd oo sidaan u arko maalma koobani naga xigaan waana hubaal inay barbaartu waqti dhaw dhalin doonto goalkii guusha bi’idnilaahi al kariim .
Waxaa xiga qormadan qormo kale oon kaga hadli doono aragitidayda ku wajahan “ roadmap ka“ „Khaaridadda wadada“ oo ah talooyin aan la wadaagi doono barbaarta si aanan guushooda looga leexin khaaridadda saxda ah .
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/maalin.jpg 810 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-04 13:01:522018-07-04 13:03:17KACDOONKA BARBAARTA SITTI UULAHA LA GAADHAY
HUB SHAKI DHALIYAY OO U SOO DAGAY DOWLADDA SOOMAALIYA IYO GOOB QARSOODIYA OO... Barbaarti magaalada Biki laga soo baro kiciyay oo Dirir-Dhaba qado sharaf loogu...